25 / 04 / 2021 25 / 04 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 1021 Views စာ0မှတ်ချက် ၇၅၁၂၀ K-75120SO, ၇၅၃၀၈ R75308-D2, 80012 မျောက်ဘုရင်က Warrior Mech, နက္ခတ်ဗေဒင်, Astromech Droid, bd-1, ကို C-3PO, Chopper, Droid, Droideka, Droids, ဂျေဒီ: ပြိုလဲအမိန့်, K-2SO, Lego, Lego Droideka, Lego Star Wars, R2-D2, သူပုန်များ, Rogue တစ်ခုမှာ, Rogue တစ်ခုမှာ - တစ် Star Wars အကွောငျးအရာ, Star Wars, Star Wars ဂျေဒီ: ပြိုလဲအမိန့်, Star Wars သူပုန်များ
Droids များသည်ပုံမှန်ပါဝင်မှုဖြစ်သည် Lego Star Wars နောက်ထပ် R2-D2 အတွက်နောက်ထပ်အစုတစ်ခုလာပါပြီ။ ဒီတော့ဒီနေရာမှာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အစုံလိုအပ်သည့်နောက်ထပ်သတ္တုဇာတ်ကောင်ငါးခုရှိပါသည်။
၇၅၃၀၈ R75308-D2 အသစ်နှင့်အဟောင်းနှစ်ခုစလုံးသည်အခြားအုတ်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသော droids များနှင့်ပူးပေါင်းမည်ဖြစ်သော်လည်း BB8, D-0 နှင့် R2-D2 အပြင်ဘက်တွင်ရှိသည့်နက္ခတ်ဗေဒင်နှင့်အပေါင်းပါများလည်းရှိသည်။ Lego ဒီဇိုင်နာများလာမယ့်ကိုကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ဗီဒီယိုဂိမ်းကမ္ဘာမှသည်အတွင်းအတွင်း၌သတ်မှတ်ထားသည့်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများအထိ Star Wars စကြာ ၀ universeာမှာသူတို့လိုအပ်တဲ့ droids ၅ ခုရှိတယ် Lego အစုံ။
5 - Chopper
ကာတွန်းကနေကြိုဆိုပါတယ် Star Wars သူပုန်များစီးရီး, Hera Syndulla မှဒီစိတ်မကောင်းစရာမဟာမိတ် R2-D2 ထက် astromech ၏သေးငယ်မော်ဒယ်ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ဒီထက်အလုပ်လုပ်တဲ့သို့မဟုတ်ယုံကြည်စိတ်ချရသော။ Chopper သည်ပုံမှန်အားဖြင့်လက်နက်တပ်ဆင်ထားပြီးခန္ဓာကိုယ်အောက်ခြေရှိစွမ်းအားကြီးမားသည့်ဒုံးကျည်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Lego ရော်ဘာဘီးကိုပုံမှန်လဲလှယ်ပေးသည်ဟုထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။
4 - K-2SO
ဤပုန်ကန်သော Droid သည် Rogue One: A တွင်စတင်ခဲ့သည် Star Wars အင်ပါယာ၏ပြန်လည်ပရိုဂရမ်လုံခြုံရေးယူနစ်အဖြစ်ယခုသူပုန်များဘက်သို့လှည့်။ ဇာတ်ကောင်နှစ်ခုနှင့်အတူလုပ်သောတ ဦး တည်းအပါအဝင်ရှေ့တော်၌အုတ်များတွင်ယခင်ကနှစ်ခုကြားမှာရှိခဲ့သည် နည်းပညာ 75120 K-2SO ၌တည်၏။ သို့သော်အုတ်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသောဗားရှင်းသည်နှစ်မျိုးလုံးအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်နိုင်ပြီး၊
3 - bd-1
၏ကြယ်မှလက်ထောက်အဖြစ် Star Wars Jedi: Fallen Order, BD-1 ၏ဒီဇိုင်းသည် AT-ST လမ်းလျှောက်သူနှင့်ဆင်တူသည်။ ခေါင်းတစ်လုံးနှင့်ခြေထောက်နှစ်ချောင်းတို့သည် BD-1 ၏ဖွဲ့စည်းပုံအများစုဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်မခက်ခဲပါ Lego ကိုင်တွယ်ရန်ဒီဇိုင်နာများ။ Functions များတွင်သူ၏ Jedi သူငယ်ချင်းအတွက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအစီအစဉ်များကိုထုတ်ပစ်ခြင်းပါဝင်သည်။ ၎င်းမှာသစ်ရွက်များပျောက်ကွယ်သွားနိုင်သည် ၇၅၃၀၈ R75308-D2'' s ကို စာအုပ်.
2 - Droideka
Droideka ဟုလူသိများသည့် Mechanical menace သည်အဆက်မပြတ်အနီးကပ်ပေါက်ကွဲသောမီးနှင့်သူတို့ကိုပေါက်ကွဲစေနိုင်သောအလွန်ဝေးကွာသောတိုက်ခိုက်မှုများနှင့်ထိတွေ့နိုင်သောအကာအကွယ်တစ်ခုဖြင့်ရိုက်နှက်ရန်နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသောခက်ခဲသောရန်သူဖြစ်သည်။ ငါတို့ကိုယ်ပိုင်ကြိုးစားခဲ့တယ် အသေးစား - စကေးဗားရှင်း အရင်ကလိုပဲ Lego အုပ်စုဖွဲ့သော်လည်းအဓိပ္ပာယ်ကျယ်သောစကားပြန်ဆိုချက်သည်ဒိုင်ရိုမီးစက်အပါအဝင်ရှုပ်ထွေးသည့် Droid အစိတ်အပိုင်းများကိုထုတ်ဖော်နိုင်သည်။
1 - ကို C-3PO
R2-D2 သည်သူ၏အဖော်ရွှေမတိုင်မီအကြီးအကျယ်မော်ဒယ်လ် ၂ ခုရရှိခဲ့သည်ဟူသောအချက်သည် (တစ်ခုနှင့်တစ်ခုမတူ) နည်းပညာ) တွင်အများဆုံးရှုပ်ထွေးနက်နဲသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည် Lego ကမ္ဘာကြီးကို။
သို့သော်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအချိန်မရှိခဲ့ပါ Lego ဤ option ကိုထပ်မံလေ့လာရန်အုပ်စုလိုက်။ စည် - ယွန်းထားသောရွှေအုတ်များသည် Droid ၏ရောင်ပြန်ဟပ်မှုကိုဖမ်းယူနိုင်ပြီး၎င်းတို့ထဲရှိအရေအတွက်နှင့်ယှဉ်နိုင်သည် 80012 မျောက်ဘုရင်က Warrior Mech။ Plus အားသူသင်တန်း၏ဘေးတွင်ကြီးစွာသောထို့အပြင်စေချင်ပါတယ် ၇၅၃၀၈ R75308-D2.
← Lego ချဲ့ Ideas ဒီစိတ်ကူးထို့အပြင်နှင့်အတူ 21325 အလယ်ခေတ်ပန်းပဲဆရာ
LEGO နှင့်ကမ္ဘာ့ဖလားပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်အတူ Red Riding Hood ၏ပုံပြင်ကိုပြန်လည်မြင်ယောင်ကြည့်ပါ →